अटल बिहारी वाजपेयीकाे प्रसिद्ध कविता: मृत्युसँग जोरी - Everest Dainik - News from Nepal
अटल बिहारी वाजपेयीकाे प्रसिद्ध कविता: मृत्युसँग जोरी
खोजियो जोरी !
खोजियो जोरी, मृत्युसँगै खोजियो !
भिड्ने मेरो कुनै चाहना कहाँ थियो,
घुम्तीमा भेटैंला वाचा नै कहाँ थियो।
बाटो छेकेर ऊ सामुन्ने उभ्भियो,
लाग्यो जीवनभन्दा ऊ ठुलो भैदियो ।
मृत्युको आयु कति एक क्षण मात्र हो,
जिन्दगी शृंखला चार दिन हैन हो ।
याे पनि पढ्नुस कविता: "तथस्त"
म जिएँ तृप्त भइ, मन लगाई मरुँ,
फर्की आउँछु भने, जाँदा किन म डरूँ?
ए मृत्यु तँ चोरी चोरी न आ,
सामुन्ने आई प्रहार गर छातीमा ।
मृत्युबाट बेखबर, जिन्दगीको यो सफर,
साँझको यो कालिमा, रात बाँसुरीको स्वर।
यस्तो त हो कहाँ दुःख नै छैन क्यै,
पीर आफ्ना बिरानाका कम छन् र खै ?
प्रेम धेरै बिरानाहरूले गरे,
आफ्नासँग गुनासो रहेन कुनै।
हर चुनौतीसँग म जुझे के भनूँ,
आँधीमा जल्न लाए दियालाहरू।
आज आँधी-हुरी-हुण्डरी सामुमा,
याे पनि पढ्नुस चर्चामा प्रधानमन्त्रीकाे कविता ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ’
नाउ भुमरीको घरमा भयो पाहुना।
तर्न सक्छु म भुमरी छ यो हौसला
हुण्डरी देखि मन झन् अटल भइदियो
खोजियो जोरी मृत्युसँगै खोजियो !
ट्याग्स: atal bihari vajpeyee, poem, translation